Isinqumo seCaf sizoshaya awe-EPL
ABADLALI beLiverpool uMohamed Sala noSadio Mane abayingxenye yeqembu elivuthayo likaJurgen Klopp kwi-English Premier League elingakashaywa kule sizini. Isithombe: AP Photo/Kerstin Joensson
ISINQUMO seConfederation of African Football (CAF) sokubuyisela i-Africa Cup of Nations (Afcon) elandelayo kuJanuwari, sizokuba nomthelela ekutheni amaqembu ase-Europe ababuka kanjani abadlali abadabuka e-Afrika.
Ngaphandle kokubanyundela kumadlelo aluhlaza, lesi sinqumo singase sibagcine benyamanambana abadlali base-Afrika abayizinsika emaqenjini abo.
UJurgen Kloop, ogila izimanga ngeLiverpool, uyena obukeka ezothwala kanzima ngoJanuwari wonyaka ozayo ngoba unezihlabani eziningi zase-Afrika.
Umqhudelwano olandelayo ususiwe kuJuni noJulayi ekubeni ngo-2017 kumenyezelwe ukuthi ngeke uphinde udlalwe ngoJanuwari ngoba kuba nokuphazamiseka ebholeni lase-Europe. Ngonyaka odlule i-Afcon ebise-Egypt idlalwe ngoJuni okwenze namaqembu ase-Europe ayijabulela kwazise isizini ibivalile.
Okwehlisa ulaka lapha wukuthi njengoba kuguqulwa kubuyelwa kuJanuwari nje, lokhu kuzokwenzeka kulo mqhudelwano ozobe useCameroon ngonyaka ozayo kuphela.
Maphakathi nesonto kuqubuke amahlebezi akhomba ukuthi izomunyungwa indaba yokushintsha isikhathi salo mqhudelwano ngoba kubukwa isimo sezulu esingesihle kubadlali nakubalandeli eCameroon maphakathi nonyaka.
Kuthiwa ngoJuni ilanga laseCameroon liba yinkinga ngale ndlela yokuthi kuphuma izidumbu ngenxa yalo. Kufanele futhi ukuthi kuzoyijabulisa iFifa lokhu ngoba lo mqhudelwano ngeke usashayisana neClub World Cup (njengeligi) esizodlalwa isikhathi eside kusukela ngawo belu * -2021.
Lesi sinqumo sishiye amaqembu amaningi ase-England engazi nokuthi kufanele enzeni ngoba azohanjelwa ngabadlali bawo abamqoka ngesikhathi lapho ebadinga kakhulu. NgoJanuwari umbango wesicoco usuke usushube kakhulu kwi-English Premiership.
UKloop kuzomele adlale ngaphandle kukaSadio Mane, Mohamed Salah noNaby Keita, uma amazwe abo ezifaka kulo mqhudelwano.
I-Liverpool ayikho ngaphandle kukaSalah noMane. KwiManchester City bazolahlekelwa uReyad Mahrez omqoka kubona kanti nokaputeni weGabon, uPierre-Emerick Aubameyang noNicholas Pepe we-Ivory Coast (bobabili be-Arsenal) abamthenge ngetshe lemali, ngeke babe khona.